Sidee ayay udhacday codayntii xilka qaadista guddoomiye Dhoobo Daareed? Maxaase loo cuskaday?( Sawiro) – Radio Daljir
Sidee ayay udhacday codayntii xilka qaadista guddoomiye Dhoobo Daareed? Maxaase loo cuskaday?( Sawiro)
Nofeembar 7, 2019 8:44 b 0
49-xildhibaan mudane ayaa ucodeeyay xilka qaadista guddoomiyaha baarlanaaka waxaana kulanka soo xaaduray 53 mudane.
xildhibaanada ayaa xilka qaadista guddoomuyaha u cuskaday in ciidamo malayshiyaad ah uu keenay xarunta baarlamaanka.
Mooshinka laga keenay guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Dhoobo Daareed waxaa qabtay oo kulanka shir gudoominayay guddoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Puntland.
Ciidamada dowladda oo bilaabay howlgalo ka dhan ah Al-shabaab
Weriye lagu dilay dalka Philippine